Israel Tourism inosheedzera Purple Standard yekuvhurazve uye kushanda mahotera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hospitality Industry » Israel Tourism inosheedzera Purple Standard yekuvhurazve uye kushanda mahotera
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Israel Breaking News • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mukugadzirira kuvhurazve Israeri kune ese ari maviri epamba nekushanya kwenyika, Israeli Ministry of Tourism uye Bazi rezveHutano vakatsanangura "Purple Standard" nyowani yekushanda mahotera munyika. Kuti mahotera arambe achitevedzera mwero mutsva, vanofanirwa kusvika nekuchengetedza mabhenji akati wandei akatsanangurwa nevakuru vebazi rezvehutano vanoona nzvimbo iyi yakachengeteka kune vafambi.
"Zvakakosha zvikuru kuti mahotera munyika yedu yese agare aine hutano hwepamusoro pamwe nehutsanana kuitira kuti vafambi vagare vakachengeteka pakushanya kuIsrael," akadaro Asaf Zamir, Gurukota Rezvekushanya muIsrael. "Kana tava kukwanisa kuvhura miganhu yedu kune vafambi vekunze zvakare, tinoda kuti vashanyi vanzwe chivimbo chekuti Israel iri kutora matanho ese ekuona kuti vane zororo rakachengeteka, rinofadza munyika yedu yakanaka uye ine hupenyu."
Kunyangwe zuva risati ratarwa kuti rwendo rwekunze rwuchazovhurwa zvakare, Ministry of Tourism iri kushanda nesimba kushandira matanho ekuchengetedza kumativi ese ekufambisa mukati meIsrael, kutanga ne "Purple Standard" protocol. Maitiro aya anosanganisira:
Yese mitemo yemafambiro ekuderedza hutachiona, iyo inosanganisira kupfeka kumeso kumeso munzvimbo dzeruzhinji, kuchengetedza chinhambwe chemamita matanhatu kureba, uye kuwacha mawoko kakawanda.
Nhungamiro dzekuvhurwa kwemahotera anosanganisira mabhenji ekugadzirira kutanga kuvhura, kuchenesa uye kuisa utachiona, zvirevo zvekuchenesa masisitimu emvura epahotera (semadziva), uye mushandi akazvipira kuti atarisire zvese zvehutano nekuchengetedza nzira.
Dzakatsanangurwa nhungamiro dzekushanda kana hotera yavhurwa, iyo inosanganisira kutarisa kwekushisa kwevashandi vese, vashanyi nevashanyi, kuisirwa pachena kweplexiglass partitions pamatafura ekugamuchira, zviratidzo zvakajeka zvinoratidza hutano uye chengetedzo matanho nezvirambidzo kune huwandu hwevashanyi muelevhi pane imwe nguva.
Kugara uchichengetedza uye kutsvaira zvivakwa zvese kunozodikanwa kune epamusoro mamiriro ehutano.
Makicheni nemakamuri ekudyira mumahotera anozovhurwa chete kana vachinge vasangana negwara rakapihwa nebazi rezvehutano. Vashandi vese vanofanirwa kupfeka masiki ekumeso uye magirovhosi apo zvigaro zvese zvicharongedzwa zvinoenderana nematanho ekupararira munharaunda. Maawa ekudya anozowedzerwa kuti abvumire kutenderera kwakakodzera.
Imba yega yega inoitwa zvakadzama uye zvakadzama nzira yehutsanana muenzi mutsva asati agona kupinda. Kana zvikatemwa kuti muenzi angave akaburitswa pachena, imba iyoyo ichavharwa kwemazuva manomwe uye ichaitwa yakakosha nzira yehutsanana kubva kumutengesi wekunze. kuona kuti zvakachengeteka kupinda zvakare.
Vashanyi vanoshandisa zvivakwa zvepa spa vanozodikanwa kuti vazadze bvunzo remibvunzo yehutano uye vatarise cheki yekushisa pamberi pekurapwa kwese kunoitwa. Varapi uye vashandi vese vanodikanwa kuti vapfeke masiki uye kugeza maoko pakati pekurapwa kwese. Uye zvakare, makamuri ekurapa anozoiswa hutachiona zvizere pakati pemumwe muenzi.
Misangano yekunze nezviitiko zvinotenderwa kusvika kuvanhu makumi mashanu ivo vachigara zvinoenderana nematanho ekuregedzera munharaunda. Zviitiko zvemukati zvinotendera vanhu vasere chete uye zvinoda kumeso kumeso.
Kunze-saiti mutengesi kupinda muhotera kuchaderedzwa zvakanyanya sezvinobvira. Kana vatengesi vakafanira kupinda mukati meimba, vanozotariswa tembiricha uye vanofanirwa kupfeka mask.
Maki ehotera mukati meIsrael atanga kuzivisa avo ekuvhurazve nzira, idzo dzakatsanangurwa pazasi.
Isrotel: Isrotel yakazivisa ayo matsva ezvehutano nekuchengetedzwa, ayo ari maringe nebazi rezvehutano uye anosanganisira kuwedzerwa kwehutsanana, kudzidziswa kwevashandi munzira nyowani, kudzikisira kuunganidza uye kuwedzera mhando yemhepo.
Dhani Hotels: Dan Mahotera aburitsa matanho avo ehutano pamwe nekuchengetedza, ayo anosanganisira macheki ekushisa, kuwedzerwa kwehutsanana kwenzvimbo dzese dzinojairika nemakamuri evaenzi, akagadziridzwa ezvikafu & zvinwiwa zvirongwa uye kuitwa kwezvekushambadzira kwenzanga matanho. Iri boka rakagadzira zvakare app inobvumidza kushoma kuonana panguva yevaenzi tarisa mukati mekuita uye kugara kune yavo dzimba. Uye zvakare, vaenzi vanogashira pasuru yekuchengeta pavanosvika neyakaumbirwa kumeso kumeso, sanitizing gel uye kumeso kupukuta.
Brown Mahotera: Brown Mahotera vakazivisa chirongwa chavo cheBrown Chakachena, icho chinosanganisira maprotocol ekuchenesa akasimudzwa, macheki ekushisa, mamask anodiwa munzvimbo dzese dzinozivikanwa, cheki isingabatanidzwe mukati kudzikisira kufumurwa uye kudzora huwandu hwemakamuri akabhukirwa chero nguva.
Fattal Hotel Management: Fattal Hotel Management yakaburitsa matanho avo ehutano pamwe nekuchengeteka, ayo anosanganisira kudzidziswa kwakakosha kwevashandi vese, cheki yekupisa kune chero munhu anopinda mumahotera avo, anoda masiki munzvimbo dzeruzhinji, yepamusoro soro yehutsanana munzvimbo dzese dzinozivikanwa nemakamuri evaenzi, kuiswa kwehukama hwevanhu munzvimbo dzese dzinojairika uye nezvimwe.
Prima Hotels: Prima Mahotera aburitsa yavo hutano uye chengetedzo maprotocol, ayo anosanganisira kuwedzerwa kwehutsanana munzvimbo dzese dzehotera, kutarisa kusingabatanidzwe, cheki tembiricha, sanitizing zviteshi zvakaiswa mukati mega hotera imwe neimwe, kusimukira munharaunda munzvimbo dzakajairika uye chinodiwa chemask.
Abraham Hostels: Abraham Hostels ari kutora chengetedzo dzese pane zvese zvivakwa zvavo mukati meboka uye akazivisa kuti vachateerera kumitemo yakadomwa muPurple Standard. Vashandi vese vakadzidziswa nemitemo mitsva yakatsanangurwa neHurumende kuti vaone kugara kwakachengeteka uye kunakidza kwevafambi.